सख्त सूर्य, हावा र पानी सर्तहरू। बच्चाहरु र वयस्क को सख्त नियम
Tempering मनोरंजन गतिविधिहरु को दायरा छ। तिनीहरूलाई धन्यवाद, जीवित वातावरण प्रतिकूल मौसम र जलवायु शर्तहरूमा शरीर गरेको प्रतिरोध बढ्छ। अर्को, नियमहरूमा र tempering को प्रविधी को विचार गर्नुहोस्।
उछाल को आधारभूत नियमहरू निम्न गरेर, व्यक्ति समसामयिक परिचालन लागि तिनीहरूलाई तयार, शरीर गरेको प्रतिरक्षाको गाडिहरु। प्रक्रिया एक व्यक्ति थप सन्तुलित बनाउन, को भावनात्मक क्षेत्र पत्र मदत, रोकी। , साथै, यो मूड सुधार समग्र टोन, प्रदर्शन र धीरज बढ्छ। प्राकृतिक कारक को सबै भन्दा कुशल प्रयोगको लागि उछाल को आधारभूत नियमहरू पालन गर्नुपर्छ।
जोखिम को तीव्रता
यसलाई बिस्तारै वृद्धि गर्नुपर्छ। को quenching प्रभाव को तीव्रता को जीव उनको जवाफ सक्षम थियो भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ। प्रचार कम लोड प्रभाव अत्यधिक अधिभार वा महत्वपूर्ण निषेध प्रकुपित। यो सबै उछाल रोक्छ। विशेषज्ञहरु सिफारिस छैन बरफ वा हिउँ rubdown मा एक पौडनु संग प्रक्रिया सुरु। तिनीहरूले गम्भीर चोट हुन सक्छ। शरीर मा प्रक्रियाहरु को प्रारम्भिक चरणमा मा, हृदय श्वसन र स्नायु प्रणाली को भाग मा एक निश्चित प्रतिक्रिया छ। प्रतिक्रिया को नियमित पुनरावृत्ति संग क्रमिक कमजोर बन्नेछ। प्रक्रियाहरु को पछि आवेदन कुनै tempering प्रभाव छ। यस मामला मा, शरीरमा प्रभाव को लम्बाइ र बल परिवर्तन।
नियम तीव्रता को मात्र नियन्त्रण, तर पनि प्रक्रियाहरु को निरन्तरता प्रदान सख्त। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनकालमा क्रमबद्घ पुनरावृत्ति implies। उपचार बीच ब्रेक अन्तिम वर्ष को अवधि भन्दा ठूलो हुँदैन। थप प्रभावकारी छोटो छलफल, तर दुर्लभ र लामो भन्दा बारम्बार उछाल छन्। यो दिन मोडमा प्रक्रियाहरु को आवृत्ति समाधान गर्न उचित छ। यस्तो सिफारिसहरू समावेश र छोराछोरीको उछाल लागि नियम छन्। एक युवा उमेर मा यो प्रक्रिया को क्रमबद्घ कार्यान्वयन गर्न एक बच्चा सिकाउन धेरै सजिलो छ। को मा फिक्सिंग दिन को मोड सख्त दर, 2-3 महिना पाठ्यक्रम को समाप्ति 3-4 हप्तामा प्रभाव को लापता गर्न प्रमुख कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। वयस्क र बच्चाहरु मा 5-7 दिनमा। त्यहाँ कुनै पनि रोग थियो भने हुनुपर्छ प्रक्रिया निलम्बन। रिकभरी पछि, उछाल को नियम पालन गर्न सुरु गर्न फेरि। यस मामला मा बच्चाहरु को लागि वयस्क अत्यन्त महत्वपूर्ण समर्थन छ। व्यवस्थित प्रदर्शन प्रक्रियाहरु आमाबाबुको राम्रो उदाहरण हो।
को जीव को व्यक्तिगत सुविधाहरू
नियम उछाल - छैन केवल प्राविधिक प्रक्रियाहरु को एक सीधा कार्यान्वयन छ। आफ्नो कार्यान्वयन तालिका अप चित्रकला मा खातामा एक गर्न जीव, susceptibility वा अन्य प्रभाव को व्यक्तिगत विशेषताहरु लाग्छ। तसर्थ, वास्तवमा बावजुद त्यहाँ उछाल को मौलिक मानव अधिकार, को प्रक्रियाहरु प्रदर्शन सल्लाह लागि एक विशेषज्ञ परामर्श गर्नुपर्छ अघि छन्। यो पहिलो पटक प्रशिक्षण सुरु निम्ति विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। शरीर को विशेषताहरु दिइएको, डाक्टर व्यक्तिगत कार्यक्रम विकास हुनेछ। एक विशेषज्ञ विद्यार्थी वा मान्छे को लागि सख्त को नियम समायोजन गर्न सक्छन् उन्नत उमेर। भविष्यमा, हामी उपचार को तीव्रता र फ्रिक्वेन्सी विनियमित गर्न निरन्तर आत्मसंयम आवश्यक छ।
सख्त अन्य नियमहरू
को प्रक्रिया पालना सकेसम्म धेरै कारक रूपमा प्रयोग गर्न। यो उदाहरण चिसो र गर्मी, ऊर्जा रेज, पानी र यसको अगाडी, हुन सक्छ। दिन को पाठ्यक्रम मा धेरै प्रभाव लागू गर्दा तपाईं बीच मा विश्रामहरू लिनु आवश्यक छ। निम्न प्रक्रिया प्रत्येक सामान्य शरीर तापमान पुनर्स्थापना पछि मात्र प्रारम्भ गर्नु पर्छ। जरूरी, जो उछाल नियम समावेश, प्रक्रियाहरु को एक अनुक्रम छ। वर्ग अघि अझ कोमल कसरत कसरत खर्च गर्नुपर्छ। यसलाई दल्नु वा खुट्टा स्नान हुन सक्छ।
थप जानकारीको लागि,
माथिको नियम पालन गर्न विफलता, तपाईं मात्र चाहेको प्रभाव हासिल गर्न सक्दैन, तर पनि शरीर, hypothermia र अन्य रोग अवस्था ट्रिगरिङ हानी। यो पनि त्यहाँ contraindications एक नम्बर प्रक्रियाहरु tempering प्रदर्शन हो कि सजग हुनुपर्छ। विशेष, यस्तो प्रशिक्षण ज्वरो, circulatory विफलता, 2-3 Tbsp लागि तीव्र मानसिक विकार, hypertensive संकट, आक्रान्त सिफारिस गरिएको छैन।। Contraindications पनि colic (मृगौला र कलेजो), व्यापक बल्न, अस्थमा आक्रमण, खाना विषाक्तता समावेश गर्नुहोस्।
tempering हावा को नियम
प्राकृतिक कारक को प्रभाव सबै शरीर प्रणाली को गतिविधि को सुधार गर्न योगदान। हावा Tempering endocrine, पाचन र endocrine प्रक्रियाहरू को पाठ्यक्रम मा विशेष लाभदायक प्रभाव छ। साथै, श्वसन र हृदय प्रणाली को गतिविधि बढावा, त्यहाँ रगतको morphological संरचना परिवर्तन हो। त्यहाँ तापमान आधारमा हावा स्नान को धेरै प्रकार छन्:
तातो (30 डिग्री माथिको।)।
न्यानो (22 भन्दा बढी ° C)।
Indifferent (भित्र 21-22 डिग्री।)।
सुन्दर (बारेमा 17-21 ° C)।
सामान्य चिसो (बारेमा 13-17 डिग्री।)।
चिसो (बारेमा 4-13 ° C)।
यसलाई सक्रिय आन्दोलनहरु संग सडक मा उपस्थिति संयोजन गर्न उचित छ। आउटडोर खेल - उदाहरणका लागि, हिउँदमा यो स्किइङ वा स्केटिङ गर्मी मा, हुन सक्छ।
विशेषज्ञहरु मौसम जस्तोसुकै 16 डिग्री भन्दा कम छैन एक तापमान मा एक कोठा मा हावा स्नान लिएर सुरु गर्न सल्लाह।,। तपाईं मात्र एक निश्चित समय पछि सडक मा पारित। कोठा राम्रो ventilated गर्नुपर्छ। शरीर उजागर र कुनै थप 3-5 मिनेट भन्दा एक कोठा मा हो छ। पाठ्यक्रम को सुरुमा सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट समय हो। अवधि पछि बढ्छ। रिसेप्शन समयमा, सुन्दर र विशेष गरी चिसो स्नान ठाँउ, पैदल, gymnastic अभ्यास मा जगिङ गर्नु पर्छ।
सडक मा प्रक्रियाहरु प्रदर्शन
शरीर तयार गर्न पछि, यो बाहिरी हावा पठाइएको गर्न सकिन्छ। एक windless ठाउँमा स्नान लिएर प्रत्यक्ष रेज सुरक्षित। बारेमा 20-22 डिग्री को एक तापमान मा प्रक्रिया सुरु। अवधि 1 हावा स्नान - 15 मिनेट भन्दा कुनै थप। पछि उछाल को अवधि 10-15 मिनेट वृद्धि भएको छ। प्रशिक्षित मान्छे मात्र स्वागत चिसो स्नान गर्न सक्दैन। 1-2 मिनेट 8-10 एक वृद्धि पछि - प्रक्रियाहरु को अवधि। एयर स्नान पछि 1.5-2 घण्टा भन्दा कुनै पहिले सुरु गर्नुपर्छ र समाप्त - 30 मिनेट को लागि। खाने अघि। हावा मा सख्त को परिणाम प्राप्त गर्न को लागि महत्वपूर्ण अवस्था एक मौसम फिट कि लुगा प्रयोग गर्न छ र हावा प्रवाह मुक्त परिसंचरण अनुमति दिन्छ।
सोलार थर्मल इन्फ्रारेड विकिरण शरीरमा उच्चारण प्रभाव अलग छ। यो गर्मी को थप विकास गर्न योगदान पुग्छ। यो छाला देखि वाष्पीकरण वृद्धि, पसिना ग्रन्थीहरूको गतिविधि बढ्छ। आवरण जहाजहरु dilate, छाला निस्तब्धता, रक्त बढ्छ विकास। कारण प्रभाव गर्न इन्फ्रारेड विकिरण को पराबैंगनी विकिरण को प्रभाव बढ्छ। यूवी विकिरण प्राथमिकताको प्रतिक्रियाशील छ र एक महत्वपूर्ण जैविक प्रभाव छ। यसको प्रभाव भिटामिन डी उहाँ उत्पादन बढ्छ कारण, बारी मा, विकास रोक्छ छोराछोरीको rickets। साथै, पराबैंगनी रेज रगत संरचना बृद्धि।
नियमहरूमा यसो रूपमा सूर्य tempering को Sunbathing तपाईं बिहान आवश्यक छ। यस समयमा, यो एकदम तातो छ। जब यो हावा सफा र ताजा छ। साथै, विशेषज्ञहरु सूर्यास्त अघि, साँझ एक स्नान लिइरहेको सुझाव दिन्छौं। छैन कम 18 भन्दा डिग्री को एक तापमान मा 8 देखि 11 र 17 19. पहिलो ले स्नान - बीचको सडक खण्ड सर्वश्रेष्ठ टेनिंग समयमा9देखि 13 र 16 18 घण्टा देखि अवधि, र दक्षिण छ। बिस्तारै एक घण्टा ल्याइएको बेला आफ्नो चौडाइ, पाँच अधिक मिनेट, को 3-5 मिनेट। वाहेक पछि हुँदैन। स्नान को स्वागत समयमा छैन सुतिरहेको हुनुपर्छ। आँखा घाम सुरक्षित हुनुपर्छ र टाउको - पनामा।
घरमा सख्त को सबै भन्दा साधारण प्रकारका wiping, घनघोर र खुट्टा स्नान समावेश गर्नुहोस्। यी प्रक्रिया घरमा प्रदर्शन गर्दै छन्। एक तौलिया, स्पन्जले, पानाहरू वा 34-36 डिग्री भित्र पानी तापमान संग moistened विशेष mitten संग wiping प्रदर्शन। कार्य बाहिर क्रमिक हथियार मा, फिर्ता आफ्नो खुट्टा लगे हुन्छ, छाती, र त्यसपछि। अर्को, शरीर अलि कति राता हटाउन गर्न ड्राई तौलिया प्रयोग। हरेक 3-5 दिन, पानी तापमान 1-2 डिग्री द्वारा कम गर्नुपर्छ। 2-3 महिनामा 10-12 डिग्री पुग्न। कहिलेकाहीं यो 22-24 डिग्री गर्न तापमान ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। पनि 2-3 महिनाको लागि बाहिर गर्दा Rubdown। अनुकूल प्रवाह मा 10-12 ° सी मा थप घट गर्न अगाडि बढ्न सक्छ प्रक्रियाहरु tempering को प्रभाव बृद्धि गर्न खुला सञ्झ्याल वा प्यानमा मा सिफारिस गरिएको हो। यस मामला मा तापमान धेरै कम हुनु हुँदैन।
गर्भवती महिला मा दबाव।
अनुकूलता spouses लागि विश्लेषण
पहिले र पछि Orthognathic सर्जरी: समीक्षा
अनुहार मा मुखासे को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी
खोल्ने पर्खाल विस्तार, हीरा उपकरण छ ठोस मा खुलने काटन
एक breathalyzer कसरी मूर्ख बनाउन?
Fibroids: उपचार र हटाउने। Subserous myoma नोड। मध्यवर्ती myoma नोड
श्रम नजिक को Prenatal लक्षण शुरू